Nnukwu ụgbọ elu Qatar Airways gbadara na Makedonia Alexander The Great Airport
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Nnukwu ụgbọ elu Qatar Airways gbadara na Makedonia Alexander The Great Airport
Qatargbọ njem ụgbọelu Qatar Airways mbụ kwụsịrị na Doha ruo Skopje ruru ala taa na Alexander the Great Airport. A ga-arụ ọrụ ọhụụ ụzọ isi obodo nke Republic of Macedonia ugboro anọ kwa izu na ụgbọ elu Airbus A320, na-egosipụta oche 12 na Business Class na oche 120 na Economy Class.
Skopje na-enye ọnụ ụzọ ámá maka mba nwere ebe mara mma, gụnyere ọdọ mmiri ndị mara mma, ugwu, na obodo ndị mara mma. Ndị gara Skopje nwere ike ịchọpụta agbata obi oge Ottoman, zụọ ahịa na bazar ochie, ma ọ bụ gaa na ọdọ mmiri n'akụkụ Orchid na nnukwu ụlọ ya. Ndị njem ga-achọ inweta ọdịbendị na ọdịbendị pụrụ iche nke obodo ahụ nwere ike ịgba akwụkwọ tiketi ha na weebụsaịtị Qatar Airways ma ọ bụ ngwa mkpanaaka emepụtara ọhụrụ.
Onye isi ahia nke Qatar Airways, Maazị Ehab Amin, onye jere njem ụgbọ elu mbido ya na onye nnọchi anya gọọmentị Macedonia na Qatar, bụ Oriakụ Vukica Krtolica Popovska, bụ onye Mịnịsta ụgbọ njem na nkwukọrịta Macedonia, Maazị Goran Sugareski nabatara ya; Onye isi njikwa nke ọdụ ụgbọ elu TAV Macedonia, Maazị Alp Er Tunga Ersoy; na onye nnọchi anya Qatar na Skopje, HE Mr. Hassan Bin Abdullah Zaid Al Mahmoud, na Alexander the Great Airport, Skopje. E nyere ndị bịara nnọchi anya VIP si Doha nnu na achịcha, nnabata ndị Masedonia nke ọma, ka ha si n'ụgbọelu ahụ rituo.
Qatar Airways Group Chief Executive, Onye ukwu Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Oge ọkọchị a bụ oge ọrụ maka Qatar Airways, ka anyị na-aga n’ihu mgbasawanye nke Ọwụwa Anyanwụ Europe. Ọrụ ọhụrụ anyị na-eme kwa izu na Skopje bụ atụmanya atụ anya nke ukwuu na map ụwa anyị, nke ga-enyere anyị aka ijikọ ma ndị njem azụmahịa na ndị njem ezumike na Republic of Macedonia. Anyị na-ele anya ịnabata ndị njem anyị nọ n’ụgbọ elu ụgbọ elu n’obodo a na-adọrọ mmasị. ”
Onye isi njikwa ọdụ ụgbọ elu TAV Macedonia, Maazị Alp Er Tunga Ersoy kwuru, sị: “Ọ bụ ihe obi dị ukwuu nye anyị ịnabata ụgbọ elu mbụ Doha-Skopje na ọnụ ụzọ nke Qatar Airways na ahịa Macedonian, dịka otu n’ime ụgbọ elu kachasị nwee ekele ụdị n'ụwa niile. Doha ga-abụ ebe ọhụụ mara mma maka ụmụ amaala Macedonia, maka oge ezumike na azụmaahịa, na-ejikọ ha na ebe 150 ọzọ gafere ụwa. "
Macedonia bụ ebe etiti maka ịhazi igwe, kemịkalụ, osisi, akwa, akpụkpọ anụ na ụlọ obibi akwụkwọ, wee bụrụ otu n'ime akụnụba Top 10 n'ụwa maka azụmaahịa. Mwepụta nke ụzọ ụgbọ elu na-emeri mmeri na Skopje ga-enyere ndị ọchụnta ego Macedonia aka ijikọ ha na ndị mmekọ azụmahịa ha n’ihe karịrị ebe 150 gburugburu ụwa.
Na mgbakwunye, mbido ọrụ ụgbọelu ikuku na Skopje site na Qatar Airways Cargo ga-akwalite uto azụmaahịa ikuku na Republic of Macedonia site na ijikọta mba ahụ na ndị isi na-ebubata ya na mgbago ugwu Asia site na steeti ụgbọ elu Doha hub. Launchedlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na-ebugharị ụgbọ mmiri na-eme ka ihe ngwọta dị jụụ na-enweghị atụ na-enye ọrụ zuru oke iji kwado mbupụ mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi ọhụrụ si Skopje gaa n'ọtụtụ ebe gafee netwọk ụwa ya.
Ọrụ ụgbọelu mbụ nke Republic of Macedonia ga-enyekwa ndị njem ntụsara ahụ ohere ịbanye Australia, ebe ihe karịrị 200,000 Macedonian Australians bi.
Qatar Airways na-agbatịwanye mgbasawanye na Eastern Europe, yana ọrụ Prague, Czech Republic na Kyiv, Ukraine ga-amalite na njedebe nke August.
Qatar Airways, onye na-ebu mba nke Qatar, bụ otu n'ime ụgbọ elu na-eto ngwa ngwa na-arụ ọrụ otu n'ime ụgbọ mmiri kacha nta n'ụwa. Ugbu a n'afọ nke iri abụọ ọ na-arụ ọrụ, Qatar Airways nwere ụgbọ elu nke oge a nke ụgbọ elu 20 na-efega azụmaahịa na ebe ezumike gafere mpaghara isii.
Doha - Skopje Flight Atụmatụ:
Mọnde, Wenezdee, Fraịdee na Sọnde
Doha (DOH) na Skopje (SKP) QR305 pụrụ: 06:50 abịarute: 11:15
Skopje (SKP) gaa Doha (DOH) ruo QR306 pụrụ: 12:15 abịarute: 18:15
Gazpromneft-Aero na SOCAR Turkey Petrol Enerji bịanyere aka na nkwekọrịta
Ngwaahịa Batik Air dị ugbu a na Sabre